प्रचण्डलाई फेल गराउन भारतले ल्यायो यस्तो रणनीति ! « Surya Khabar
प्रचण्डलाई फेल गराउन भारतले ल्यायो यस्तो रणनीति !
काठमाण्डौ । भारतले ‘समावेशी संवादमार्फत असन्तुष्ट पक्षका माग सम्बोधन गरेर मात्र नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा ल्याउन नेपाललाई दबाब दिएको छ । संविधानलाई स्वागत र समर्थन गर्न नेपालले गरेको आग्रह उसले पुनः अस्वीकार गरेको छ । भारतको चारदिने राजकीय भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँगको भेटवार्तामा उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले संविधानमा असन्तुष्ट सबै पक्षका आकांक्षा समेट्न आग्रह गरे ।
दाहाल र मोदीबीच ‘वान अन वान’ वार्ता सकिएपछि नेपाल–भारत द्विपक्षीय बैठक सुरु भएको थियो । बैठकमा नेपाल र भारतबीचको बहुआयामिक सम्बन्धका सबै पक्षमा संक्षिप्त छलफल भएको थियो । बैठकपछि नेपाल र भारतबीच तीनवटा समझदारीपत्र तथा सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसपछि दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमार्फत आफ्ना धारणा राखेका थिए भन्दै शनिबारको नागरिक दैनिकमा समाचार लेखिएको छ ।